imikhiqizo | IShijiazhuang Neming Import & Export Co, Ltd.
Ukugqoka kwethu kwezemidlalo kuklanyelwe ukuhlinzeka nge-premium nokugqoka okunethezekile kwabasubathi nabathandi bezemidlalo. Zenziwe ngokusebenza okuphezulu nezinto eziqinile.
Kukhona ububanzi bendwangu ebanzi, njengokotini, ukotini / i-poly / i-spandex blend, i-polyester, i-viscose, i-nylon njll. , anti-iphunga njll.
Lindela indwangu esebenzayo, kukhona nokufekethiswa okuhlukahlukene, ukuphrinta kukasilika, ukuphrinta kwedijithali, ukuphrinta kwe-silicon, ukufaka embossing, ukuphrinta kokudlulisa ukushisa ukwenza wena neqembu lakho nihluke.
Ukugqoka kwethu kwezemidlalo kufaka: iJersey, Shirts Tee, Polo Shirt, Tops & Shorts, Pants, Training Suit, Joggers, Bibs njll. Enziwa ngezifiso ngokuphelele.
Sinikezela ngezinhlobo eziningi zokungcebeleka ezigqokweni zamahembe, amahembe e-Polo, amasiketi, ama-hoodi njll. Uzothola isipiliyoni sokugqoka nokukhululeka ngezikhathi zakho ezingasebenzi.
Akunandaba ukuhlala nomndeni wakho noma yimuphi umsebenzi ongaphandle, ungathola izembatho ezifanele kithi. Insizakalo yethu ye-bespoke ifaka izitayela, ubukhulu, okuqukethwe kwendwangu nemibala, ilogo njll. Noma yini oyidingayo, sizokwenzela yona. Sizokunikeza izingubo ezifakiwe ezikwenza uhluke.
Asikhiqizi izingubo kuphela, sinakekela wena kakhulu…
Sinikeza ukukhetha okukhulu kwezingubo zomsebenzi, njengama-T shirts, ama-polo Shirts, iyunifomu, amaJakethi okuphepha. Zakhiwa kusuka ezindwangu eziqinile, eziphefumulayo nezikhethekile zokuhlinzeka ngokuvikelwa kosuku lonke phakathi nemisebenzi yakho. Izingubo zethu zomsebenzi zikhiqizwa ngobuchule kuzo zonke izimo zokusebenza, njengesisekelo sendwangu, amabhatshi aphakathi noma angaphandle.
Ukugqoka kwethu kwangaphandle kwenziwa ngezinto ezinhle kakhulu ezisebenzayo nezintofontofo. Izokuvikela futhi uyijabulele emisebenzini yakho yangaphandle kunoma yiziphi izimo zezulu.
Ifika ekugqokeni ukushushuluza, ukugqoka imvula, okwephula umoya, amaJakethi woboya, amajakhethi wesoftshell, ibhantshi eligwedliwe. Ziyizikhethelo ezinhle zokuhamba ekuseni, ukudoba, ukuzingela, ukushushuluza, okungajwayelekile, ukukhempa, ukukhuphuka ukukhuphuka njll.